Apple waxay la wadaagtaa hagaajinta ogeysiisyada qarsoodiga khaldan ee AirTags | IPhone News
Apple waxay la wadaagtaa hagaajinta ogeysiisyada qarsoodiga khaldan ee AirTags
Kariim Hmeidan | 09/05/2022 20:34 | Qalabka IPhone
Sannad ayaa laga joogaa markii aanu gacanta ku haynay Airtag. Qalab u muuqday mid aan waligiis imanaynin maadaama ay had iyo jeer ku jirtay afka dhammaan wararka xanta ah laakiin Apple way ka caga jiidday inay soo saarto. Hadda waanu la noolnahay iyaga oo u isticmaalna si aan u helno wax kasta oo maskaxda ku soo dhaca. Laakiin iska jir, xusuusnow in aan loo isticmaalin in lagu daba galo dadka ... Maanta waxaan kuu keenaynaa qalad iPhone ah oo la xidhiidha, waxayna u muuqataa in Isticmaalayaasha qaar ayaa heli doona ogaysiisyo ah in AirTag ay si khaldan ula socoto. Sii wad akhriska aan kuu sheegeyno dhammaan faahfaahinta.
uu "Ruux" ogeysiisyada oo ay tahay in aysan soo saarin AirTag, digniintani waa khalad laakiin sida cad ayaa sababta cabsida iyo raaxo la'aanta isticmaalaha helaya. Marka loo eego warbixinnada ogeysiisyadan "ghost", Airtags-ka su'aasha ah waxay qabtaan dhaqdhaqaaqyo leh qaabab isku mid ah oo ka soo baxa isticmaalayaasha helay ogeysiiska. Wax khaldan tan iyo kuwa AirTag waxay "ku duuleysaa" agagaarka isticmaalayaasha iyo xitaa gidaarada. Laakiin Apple waxay rabeen inay bixiso xal ku meel gaar ah dhibaatooyinkan iyada oo loo marayo war-saxaafadeed kaas oo sidoo kale hubinaya in AirTags ay badbaado yihiin.
Oo waxay u muuqataa in wax walba ay u muuqdaan inay la xiriiraan u dhawaanshaha shabakadaha Wi-Fi ee u dhow iPhone, taas oo ah, iPhone wuxuu ku jahwareeriyaa shabakadaha Wi-Fi ee AirTags waxayna bilaabeen digniinta in nala socdo. Sidee loo hagaajiyaa? Xalka ku meel gaadhka ah ee Apple waa in dib loo dejiyo adeegyada goobta aaladdayada sida soo socota: Dejinta> Qarsoodi> Adeegyada Goobta, oo dami oo shid inta Wifi shaqaynayo on iPhone. La yaab ma laha in Apple ay ku dhamaato soo saarista cusboonaysiin cusub toddobaadyada soo socda si loo xalliyo cilladaan. Adiguna, miyaad heshay wargelin la mid ah? Waanu ku akhrinay...
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » Qalabka IPhone » Apple waxay la wadaagtaa hagaajinta ogeysiisyada qarsoodiga khaldan ee AirTags
Waa maxay isbahaysiga FIDO iyo sababta ay Apple u xiisaynayso isku darka heerarkeeda